SOMALILAND VS DEMOCRATIC CONSTITUTIONS, CONCEPT | Toggaherer's Blog
« C/RAXAMNAA UBALE MA AHA KULMIYE, WAA UDUB-YAHAN DIMUQURAADIYAD DOONA
MILICSIGA DASTUURKA SOMALILAND IYO MADMADAWGA UDUB KALA MAAN »
SOMALILAND VS DEMOCRATIC CONSTITUTIONS, CONCEPT
Somaliland VS democratic constitutions’ concept.3/6/2009
Sharciga dimuquraadigu muxuu ka qabaa in madaxwayne uusan qaban doorasho oo dib u dhigo iyo wareejinta xilka maamulka dalka wakhtiga uu u tartamayo doorashada dal? Waa su’aal mudan in aan si qayaxxan u sharraxano si aan u fahano khaladka ka jira dalkeena ee maanta uu gaystay madaxwaynuhu. Sharciga dimuquraadiga ah ayaa odhanaya in madaxwayne uu xilka wareejiyo muddo ka horeysa doorashada madaama uu u sharaxanyahay xisbigiisa. Sharcigan ayaa dhigaya in madaxwaynuhu wakhtigaa uu ahaado mid la siman musharaxa xisbiyada kale oo aanu noqon mid xilkii dalka wali gacanta ku haya. Madaxwaynuhu waa in uu isu soo taagaa doorashada isuna soo sharaxaa isaga oo matalaya xisbigiisa oo kaliya oo aan matalin shacbiga. Waayo waxa uu madaxwayne u yahay dalka oo dhan oo ay ku jiraan xisbiyada iyo murashaxyada kale inta ka horeysa doorashada. Sidaa darted waa in uu wareejiyaa xilka wakhtiga doorasho uu u istaagayo. Hadaba ma sharcibaa mise waa sharci darro in la yidhaa dastuurka kuma taalo in uu wareejiyaa? Inta aanan ka jawaabin aan tusaale gaaban idiinka iftiimiyo sharciga dimuquraadiga ee u yaala dalka Maraykanka ee qeexaya doorashada iyo madaxwaynaha oo xilka wareejiya. Dalka maraykanku waa dalka maanta caalamku ku daydaan xaga sharciga democratic-ga. Waxa uu dhigayaa dastuurka dalka maraykan, in madaxwaynuhu uu xilka wareejiyo muddada ka horeysa doorashada ee uu ku jiro (campaign) ka ama issharaxaada. Muddadan wuxuu soo bandhigayaa madaxwaynuhu waxa uu kaga fiicnaandoono murashaxyada kale iyo wax qabadkiisa iyadoo su’aalo laga waydiinayo meela badan oo lagu dhaliilayo iyo gol’daloolooyinkiisaba. Waxa kolka hore uu ka soo tartamayaa gudaha xisbigiisa. Xisbiga ayaa sharcigiisu dhigayaa in hadii madaxwaynaha iyaga ka soo jeeda aanay ku kalsoonayn in uu helayo ama dhaliilo badan ku gadaamanyihiin ay la tartamaan rag kale oo xisbigu door bidayo. Ka dib hadii uu ka guulaysto ayuu la tartamayaa murashaxyada xisbayada kale ka soo baxay isaga oo mid waliba khudbado badan iyo xayaysiis ama odhaah badan ka dhiibanayo idaacadaha iyo magaalooyinka oo uu ku qabto midba khudbado uu shacbiga ku soo jiidanayo. Waa sidii naadiga kubada cagta ama xulalka FIFA u qabato ciyaaraha oo kale. Gudiyo ka socda khubarada ugu aqoonta badan ee jaamacadaha ayaa diyaarinaya mawduucyo iyo mabaadii maalinba mid laga hadlayo oo ka turjumaya gabi ahaanba siyaasada gudaha iyo dibada, dhaqaalaha,horumarka bulshada iyo nolosha iyo xidhiidhka caalamiga ah. Waxa ay wax ka waydiinayaan dhaliilaha jira iyo mid waliba sida uu wax uga qaban doono. Iyaga ayaa hadana yeelanaya dood uu midba midka kale ku weerarayo iskuna sharaxayo oo ay su’aalana isku weydaarsanayaan. Dhamaan murashaxyada xisbiyada ayaan ahayn qaar iyagu haya xil xisbigu leeyahay iyo jagada gudoomiyaha xisbiga toona wakhtigaa. Tusaale, Barack Obama wuxuu ahaa murashax balse, jagada chairman ka xisbiga democrat ka waxa hayey oo usoo diyaarinayay talada, taageerada, dhaqaalaha iyo maamulka doorashada Howard Dean oo ilaa imika ah. Hadaba dimuquraadiyada asaliga ahi ma dhigayso in uu madaxwaynuhu ahaado gudoomiyaha xisbiga. Murashaxyada xisbiyada ayay tahay in aanay haynin jagada gudoomiyaha xisbiga, madaama ay yihiin murashaxyo xisbiyo doorteen. Waa si sharciga cadaalada iyo sinaanta loo dhawro.
Hadaba ma ka muuqataa dalkeena haykalkii iyo hanaankii dimuquraadiyadu lahayd? Madaama aynu isku sheegno dal xor ah oo dimuquraadi ah waa in aynu oofinaa oo fulinaa shuruucda ay leedahay dimuquraadiyadu. Waxa aynu doonaa ictiraaf inaga oo sheeganayna democratic repuplic of Somaliland. Hadaba caalamku inta aanu eegin waxa aynu doonayno waxa kaliya ee ay inaga eegaan waa dastuurka aynu dhiganay in uu waafaqsanyahay shuruucda ay leedahay xorriyada dimuquraadiyadu. Waxa kale oo la eegayaa sida aynu u tixgelino shuruucda iyo qawaaniinta dimururaadiga ee uu dal leeyahay, ee shakhsi leeyahay. Xoriyada muwaadinka ayaa iyaduna mudan in la ilaaliyo hadii ay tahay saxaafad, shakhsi aragtidiisa dhiibtay, iyo hadii ay tahay shacbi waynaha kaleba. Dawlada iyo habdhaqanka maamulkeena ayaa iaygana la eegayaa in uu tixgeliyo xoriyada dimuquraadiga iyo waliba in shacbigooda ay ugu adeegaan daacadnimo.
Dib u dhaca iyo dib u dhigashada doorashadeena maanta caalamku waxay u arkaan mid aan dimuquraadiyada meelna kaga oolin oo runtii ah dig’taatooriyad dhab ah iyo afduub xoog iyo qassab ku haysasho maamul. Waxay caalamka tustay in aynaan ahayn dal xasiloonidiisa iyo jiritaankiisuba yahay mid aan sal ku fadhiyin oo go’itaankiisu yahay mid aan la qaadan Karin oo la rumaysan Karin. Cadayn waxa u ah hadalkaa, September 2006 washington DC shirkii uu ku qabtay ururkii SOPRI ee ay ka soo qayb galeen madax fara badan oo Somaliland ka socday kaas oo uu ka mid ahaa Cabdicasiis samaale, Prof: Ibrahin maygaag iyo rag kale oo badan. Ayaa waxa ka hadlay nin ka socday state department-ga maraykanka oo yidhi go’itaanka Somaliland anaga maraykan ahaan iyo dawladaha yurub waxaanu u aragnaa in aanay Somaliland ahayn mid stable ah ama mid sal xasiloon ku fadhida oo ay tahay mid isbadeli karta barito kolka soomaaliya nabad noqoto. Waa fikrada ay inaga qabaan ree galbeedka iyo dawladaha yurub, carrabna daa hadalkeed. Waxa kale ee ay gabadh iyana ka socotay state department gu sheegtay in ay tahay kolkii ugu horeysay ee ay ka arkaan cid dhaqdhaqaaq samaynaysa oo ka soo jeeda Somaliland ama ha noqoto maamulka amaba shacbiga ee. Waxa inaga dhaqdhaqaaq badan qabqablayaasha koonfureed oo iyagu albaabkastaba garaaca oo u dira maqaalo iyo warbixino caalamka had iyo goor.
Halkaa waxaan leeyahay inaga iyo madaxdeena ayaa gaabis ka noqonay in layna ictiraafo. Waa in aynu badinaa oo soo bandhignaa interest ga ama danaha faa’iido ee dalalka aynu ictiraafka ka doonayna inaga yeelanayaan, hadii ay noqoto khayraad dabiici ah, strategy ama istaraatejiyada dalkeena ee u’ danta ah dalalka kale oo aynu ku soo jiidanaa caalamka. Waxa muhiim ah in aynu libinlaabno xidhiidhka aynu la leenahay caalamka oo aynu kasbanaa saaxiibo badan oo inagu taageera go’itaanta, Xoriyada, Diruquraadiyada, iyo horru marka dalkeena. Maxaa uga faa’iido ah caalamka gooni isutaaga iyo ictiraafka Somaliland? Waa su’aal u baahan in aynu ka jawaabno oo soo bandhigno waxa caalamku inaga faa’iidayo. khasaaraha aynu ku soo kordhinayno caalamka oo aynu cadayno in aynaan ku noqonayn caalamka carqalad soo kordhisa dhaqaale dari iyo horumar la’aan. Waxa muhiima in aynu samaysano khuburo aqoonyahano ah oo fahan dheeraad ah u leh dunida. Kuwaasi oo cilmi baadhis ku sameeya habka aynu caalamka uga heli karno ictiraaf iskagana dhaacicin karno oo u hawl gala raadinta aqoonsi iyo soo bandhigida, iyo abuurista xidhiidh aynu la yeelano caalamka. Maamulkii ina ibraahim Cigaal wuxuu aasaasay xidhiidh asali ah oo aynu la yeelanay wadamo badan oo Africa ah iyo saaxiibo badan sida south Africa, Ethiopia, Kenya, Uganda, tanzaniya, Japan oo deeqo fara badan inoo keentay wakhtigaa, Britain, USA iyo waddamo kale oo badan. Balse wixii aynu saaxiibo yeelanay waxa ay dib inooga gurteen markii ay arkeen maamul xumada Daahir Riyaale iyo danaha u qarsoon ee uu ka damcay dalka. Iyada oo aan odhan karno digtaatooriyad in ay taageeraan ama la saaxiibaan ayay diideen ama dib uga joogsadeen. Iswaydii oo maxay ka dideen dalalkii xidhiidhka inala lahaa ee yurub Africa iyo America? Maxaa dhaqdhaqaaq uu sameeyey maamulku ilaa intii uu talada hayey?
Qalinkii: Fuaad Ismaciil Cumar.